Saika ho firenena voalohany hanafoana ny COVID-19 i Sipra Avaratra?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Saika ho firenena voalohany hanafoana ny COVID-19 i Sipra Avaratra?
Toerana fialantsasatra malaza any Sipra Avaratra no mety ho firenena voalohany nanafaka tanteraka azy Covid-19, tsy misy tranga vaovao nanomboka ny 19 aprily 2020. Ho an'ireo mpanao fialantsasatra mitady fialan-tsasatra azo antoka sy tsy misy viriosy 2020 na 2021, dia i Sipra Avaratra no tokony ho safidiny No.1. Miaraka amin'ny tranga 108 fotsiny hatramin'ny tranga voamarina voalohany tamin'ny volana martsa, ny marary farany sitrana amin'ny coronavirus any avaratr'i Sipra dia hiala amin'ny hopitaly amin'ity herinandro ity sitrana tanteraka.
Sipra Avaratra no ihany toerana fialan-tsasatra lehibe eropeana miaraka amin'ny trangana virus coronavirus latsaka ny 110, hoy ny Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. Zava-bita mahavariana ho an'i Sipra Avaratra, tena tian'ny mpanao fialantsasatra any UK izay tonga noho ny tara-masoandro, morontsiraka fasika ary ny vidin'ny lira Tiorka fa tsy euro.
Hatramin'ny 1974, ny nosy Sipra dia nizara ho any avaratr'i Sipra Tiorka (ny Repoblika Tiorka avaratr'i Sipra, na TRNC) ary ny Greek Cypriot atsimo (ny Repoblikan'i Sipra). Ny fifandraisana eo amin'ny faritra roa amin'ny nosy dia nanjary tia fihavanana tao anatin'ny 20 taona lasa, izay fombafomba tsotra fotsiny ny fiampitana sisintany.
Rehefa voamarina tamin'ny 10 martsa ny tranga voalohany momba ny coronavirus tany avaratr'i Sipra dia nihetsika haingana ny governemanta TRNC. Tamin'ny 11 martsa, nanidy ny seranam-piaramanidina rehetra sy ny sisintany ary tamin'ny 16 izyth Nanidy sekoly ny volana martsa. Izay miditra amin'ny TRNC avy any ivelany dia napetraka tao amin'ny quarantine tao amin'ny hotely nandritra ny 14 andro. Nihatra ny fanidiana sasany tamin'ny antoandro, niaraka tamin'ny famandrihana amin'ny alina alina teo anelanelan'ny 9 alina sy 6 maraina. Nanomboka aloha ny fitsapana mba hahitana tranga vaovao.
Ireo fepetra ireo dia niafara tamin'ny fifehezana ny virus coronavirus tany avaratr'i Sipra. 108 fotsiny ny tranga tamin'ny totaliny, ary 103 ny tranga efa sitrana ary niverina tany an-tranony sy ny fianakaviany. Tamin'ny 4 Mey 2020, nesorina ny tsy fahazoana mivezivezy, ny fiandohan'ny tetezamita miverina miverina amin'ny fiainana mahazatra eto amin'ny nosy.
Vaovao tsara ho an'ireo mpizahatany UK mitady fialan-tsasatry ny fahavaratra tsy misy koronavirus na fialantsasatra amin'ny ririnina. Maherin'ny 335 andro ny masoandro amin'ny herintaona dia mandray tsara ireo mpitsidika avy any Angletera mandritra ny taona mandavantaona i Sipra Avaratra, manatevin-daharana olona marobe izay efa nanao an'i Sipra Avaratra ho fonenany.
Vaovao tsara ihany koa ho an'ireo hotely, trano fisakafoanana, fisotroana ary fisarihana maro any avaratr'i Sipra, mazoto mandray ireo mpizahatany UK hiverina haka aina sy hiala sasatra taorian'ny fanidiana lava nataony.
Noho izany, afaka manomboka mamaky fialantsasatra amin'ny fahavaratra indray ve ireo mpizahatany? Tena mino an'izany i Sipra Avaratra!
Lufthansa, Eurowings ary SWISS hiainga indray miaraka amin'ny fiaramanidina 160 amin'ny volana Jona
Italiana amin'ny Semi-fahalalahana amin'ny COVID-19: Fa tsy ho an'ny rehetra